Olee otú bulite ngosi mmịfe ka YouTube ọsọ ọsọ na mfe
> Resource> Video> Olee bulite Slideshows ka YouTube ọsọ ọsọ na mfe
Ọ bụrụ na i nwere ọtụtụ ihe ngosi mmịfe videos, Ohere inweta bụ na ị chọrọ bulite gị ngosi mmịfe ka YouTube ịkọrọ ezinụlọ na ndị enyi. Otú ọ dị, mgbe ị na-eme ya, i nwere ike na-abịa gafee nza nke nsogbu. Ka ihe atụ, gị ngosi mmịfe bụ oke buru ibu bulite ka YouTube.com (ihe karịrị 15 nkeji). Ma ọ bụ usoro nke ngosi mmịfe video-apụghị nabatara YouTube saịtị. Ọ bụrụ na i nwere nsogbu na-ebugote ngosi mmịfe ka YouTube, mere adịghị eji onye nwere ọgụgụ isi ngwa-enyere gị aka dozie ogwu nsogbu?
A ibu oké ngwá ọrụ na-ike na-atụ aro n'ebe a. Mgbe ị nanị tinye gị YouTube akaụntụ Ama, ị dị nnọọ pịa "Asuanetop" bọtịnụ na mgbe ahụ, a smart ngwa, Video Editor (Filmroa maka Mac (Si Wondershare Video Editor for Mac)), ga-akpaghị aka enyere gị aka ebipụta gị ngosi mmịfe on YouTube na nkeji, n'agbanyeghị ya format bụ dakọtara ma ọ bụ. Ọ bụrụ na gị ngosi mmịfe video bụ karịa 15 nkeji, ị nwekwara ike bee ya ka kpọmkwem ogologo ọsọ ọsọ na mfe, ma ọ bụ ukwuu mpikota onu ya maka nta size site na-ahọpụta ala mkpebi, etiti ọnụego na bit ọnụego.
Ugbu a, m ga-egosi gị otú bulite gị ngosi mmịfe ka YouTube nzọụkwụ site nzọụkwụ.
1 Import ngosi mmịfe videos n'ime nke a ngwa
Họrọ "16: 9 widescreen" ma ọ bụ "4: 3 Standard" nhọrọ ịbanye interface mgbe ị na-agba ya. Mgbe ahụ ị chọrọ mbubata gị ngosi mmịfe site na ịpị "Import" nhọrọ ke n'elu-n'akụkụ aka ekpe ma ọ bụ na-adọkpụpụta lekwasịrị faịlụ site na kọmputa nchekwa ngwa a. Ke akpatre, ịdọrọ ngosi mmịfe video ị chọrọ ikere òkè na YouTube ka a na ngwa usoro iheomume na ala.
2 (Nhọrọ) Bee gị ngosi mmịfe faịlụ maka a nta size
Ọ bụrụ na gị ngosi mmịfe video bụ oke buru ibu bulite ka YouTube.com. Ọfọn, ọ ga-adị mkpa ka ị na-bee ya n'ime a nta size- karịa 15 nkeji. Karị ịdọrọ n'elu nke red Time egosi na amalite na ogwugwu n'ókè nke clip ị chọrọ na mgbe ahụ oge ọ bụla pịa Scissor bọtịnụ kpọmkwem wepụ nke ị chọrọ.
3 Bulite ngosi mmịfe ka YouTube
Pịa "Mepụta" button, see "YouTube" taabụ, jupụta na gị YouTube ozi akaụntụ na video nkọwa ná mkpirikpi, wee see "Mepụta" button na ala-nri akuku bulite ya. N'ezie, ọ bụrụ na ị na-achọ ịkọrọ ya ka Facebook ma ọ bụ Twitter, dị nnọọ tinye akara "Share ka Facebook" ma ọ bụ "Share ka Twitter" nhọrọ.
Cheta na: Ọ bụrụ na gị ngosi mmịfe video bụ obere nnukwu, ị nwekwara ike belata ya na-erughị minit 15 site nnọọ compressing ya. Na zuru ezu nzọụkwụ bụ gaa "usoro" Atiya kama "YouTube" udi. Wee họrọ a ukwuu-abịakọrọ video usoro dị FLV na họrọ a ala video mkpebi, etiti ọnụego na bit ọnụego ke Advanced ntọala n'okpuru. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịga nke ọma belata n'akụkụ gị ngosi mmịfe video enweghị ịcha ọ bụla nke. Ugbu a, ị nwere ike re-mbubata ọhụrụ, mmepụta faịlụ ka a na ngwa wee bulite ka YouTube site na iji ụzọ n'elu.
Olee otú dezie Video on YouTube
30 nrụọrụ Mepụta ahaziri ngụsị akwụkwọ ịkpọ òkù
Olee otú Download Deezer Playlist